N'ogbe Hot Sale Fechaa faiba glaasi mkpuchi Single-kwadoro Nzọụkwụ Ladder Manufacturers na Suppliers | ABC
Hot Sale Fechaa faiba glaasi mkpuchi Single-kwadoro Nzọụkwụ larịị
FG207-T nke Abctools mepụtara bụ eriri ọkwa fiberglass nke enwere ike iji gburugburu ọkụ eletrik. Ọ dị sentimita asatọ n’ogologo ma nwee nzọụkwụ 7, oghere na-emeghe bụ 2302mm, nke mechiri emechi bụ 2408mm, na ibu bụ 10.3kg. Ebube ibu bụ ụdị II, nke bụ 225lbs. Ngwaahịa a eruola ụkpụrụ CSA na ANSI n'akụkụ niile, ma ziga ọtụtụ n'ime ha Canada, United States, na mba ndị ọzọ.
FG207-T bụ akwa mpịachi. Mgbe anaghị eji ya, enwere ike apịaji ya ma debe ya na-ewereghị ohere. Enwere oghere ngwa ọrụ n’elu ya. Enwere ike itinye ọtụtụ ngwaọrụ na nnukwu na obere olulu. Enwekwara shelf nke si n’akụkụ ngwa ọrụ a. Dị adị nke shelf a na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ese ihe, ịnwere ike itinye bọket agba ahụ na shelf, ịkwesighi ijide aka na bọket ahụ n'aka ya nke ọzọ iji rụọ ọrụ.
1. Ejiri ngwa FRP mee akwa ubube, nke enwere ike iji ya na ọkụ eletrik.
2. Enwere oghere ngwaọrụ na elu, nke nwere ike ijide ọtụtụ ngwaọrụ.
3. Ihe edere n'akụkụ nwere ike idowe nnukwu ngwaọrụ dị ka bọket agba, na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
4. rubberkwụ roba na ala na-eme ka ubube kwụsie ike.
E nwere ọtụtụ usoro nke otu faiba glaasi ladders si Abctools, nke usoro m ga-ahọrọ?
Nke mbu, dokwuo anya ahia ahia gi. Ọ bụrụ n’ị na-ere n’ahịa ndị Europe, biko họrọ usoro ladịrị faiba glaasi otu aka EFG2 ** na EFG2 ** C. Ọ bụrụ na ị na-ere na Canada, United States, na obodo ndị ọzọ, biko họrọ usoro ngwaahịa ndị ọzọ. Nke abuo, họrọ dị ka ibu fim na-arụ ọrụ dị elu dị ka nke ọma dị ka gị mkpa maka ngwa:
FG3 ** usoro ibu ọkwa bụ 200lbs / 91kg, na oghere ngwá ọrụ n'elu;
FG2 ** - T usoro nwere ibu ibu nke 225lbs / 91kg, na oghere ngwaọrụ n'elu na shelf n'akụkụ;
FG1 ** usoro ibu ikike bụ 250lbs / 113kg, ya na oghere ngwa ọrụ n’elu;
FGH1 ** usoro ibu ikike bụ 300lbs / 136kg, na oghere ngwaọrụ n'elu;
FGHA1 ** usoro ibu ikike bụ 375lbs / 170kg, ya na oghere ngwa ọrụ n’elu;
Usoro EFG2 ** nwere ikike ibu nke 330lbs / 150kg, ọ nweghịkwa oghere ngwaọrụ dị n'elu;
EFG2 ** C usoro nwere ikike ibu nke 330lbs / 150kg, na oghere ngwaọrụ n'elu;
Nke gara aga: Steprịgo Nzọụkwụ Ubu CSA ANSI Kwadoro Multi Nzube 5 Nzọụkwụ Single Side Faiba glaasi Ladder
Osote: 6 ft ụdị IA 300 lbs ibu ikike foldable triangle faiba glaasi nzọụkwụ n'ọkwá
Faiba glaasi n'ọkwá
Ihe mkpuchi ubube
ububo otu aka
6 ft ụdị IA 300 lbs ibu ikike foldable tri ...
Shelf maka ulo Ime ụlọ ime ụlọ Ogbe shelf Obere Nchekwa Obere Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo